मध्यबिन्दु अनलाइनसुशासनका पक्षमा हाम्रो ख़बरदारी | अलमलमा अगुवा, निरीह नागरिक
बिश्वब्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेको करिब दुइमहिना हुन लागिसकेको छ । एउटा निश्चित गन्तव्य बिनाको यात्रा जस्तो कोरोना संक्रमणको महामारीको उपयुक्त औषधि नभएसम्म यो यात्रा रोकिने अनुमान गर्न सक्ने केहि आधार देखिंदैन ।
यो लकडाउनको अवधिमा के गर्न हुने के गर्न नहुने केहि खास योजना बिना गरिएको बन्दाबन्दिले सर्वसाधारणलाई झन् अन्योलमा पारेको छ । संघीय सरकारले एउटा कुरा भन्दा प्रदेश सरकारले अर्कै भन्छ भने स्थानीय झन आफुखुसी नियम बनाउँछ । यसो गर्दा राज्यकै भरमा परेका सर्वसाधारणको दैनिकी झन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
सरकार घरभाडा छुट गर्नुपर्छ भन्छ तर बैंकको ऋणले बनेको त्यो घरको किस्ता घरवाला लाई बैंक ले छुट दिन्छ भन्ने आधार के ? इण्डक्सन चुलो बाले बिद्धुत महसुल छुट दिने भन्छ तर त्यो सेवाग्राहिले इन्डक्सन प्रयोग गरे- नगरेको कस्ले हेर्छ ? अत्यावश्यक सामाग्री भएको पसल खोल्न दिने भन्छ तर कुनचाहिँ पसलमा अनावश्यक सामाग्री राखेको होला र ?
आज खुकुलो भन्या छ , भोलि कडा भन्या छ । एउटा स्थिर निर्णय गरेर त्यसमा अडिग रहनुपर्ने होईन ? जसको हातमा सत्ताको बागडोर छ उसकै निर्णय अडानमा नभएपछी आम नागरिकको के हालत हुन्छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अत्यावश्यक सामाग्रीको लागि खुल्ला गर्ने भनिएको छ तर अत्यावश्यक भित्र के के सामाग्री पर्छन् किटान गर्नु पर्दैन ? पसलमा राखेका सामाग्री कुनै न कुनै बेला अत्यावश्यक ने हुन्छन् नि ! सूचनाको यो दुनियाँमा मोबाईल अत्यावश्यक हो कि होइन ? खाने सामाग्री जस्तै लगाउने लत्ताकपडा,जुत्ता चप्पल आवस्यक होईन र ? खाना बनाउने भाँडाकुँडा आवस्यक होइन ? सर- सफाइका सामान आवस्यक होइनन् ? मानव जिवनसँग जोडिएका सबै वस्तु समयानुकूल आवस्यक हुन्छन् ।
आवस्यक अनावश्यक भन्दापनी प्राय सबै पसलहरु भाडा तिरेरै सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । त्यसको जिम्मा कस्ले लिन्छ ? अनि सबै पसलमा केही न केही सामान अवस्य हुन्छन् नै, ती मध्ये कत्तिको प्रयोग गर्ने समयावधि सकिन्छ, कतिको गुम्सिएर नोक्सान हुन्छ त्यति मात्र नभइ मुसा आदि जीव जन्तुले पनि नोक्सान गर्न सक्छन् ।
कुरा सामान्य लागेपनी यस्ता साना कुराले कयौं मानिसको दैनिकीमा प्रभाव पारेको हुन्छ । राज्य संचालन गर्नेले अलि दुरदर्शिता बिचार नगरी हतारमा निर्णय लिंदा सामान्य जीवन यापन गर्ने नागरिकको जिन्दगीको यात्रामै पुर्णविराम लाग्न सक्छ । यश प्रति सम्बन्धित निकाय बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।